Homeसमाचारइन्द्रेणी बिवादबारे टिका सानुले पहिलो पटक बोलिन्, के कृष्ण कडेंलसँग सम्बन्ध बिग्रिएको हो ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 10, 2020 admin समाचार 8329
गिइन्द्रेणी कार्य’क्रममा बोलेको एक अभि’व्यक्तिका कारण बिवादमा रहेकी टिका सानुले य’स्तो भनेकी छिन् । टिकाले कृष्ण कडेंलसँग सम्ब’न्ध बि’ग्रिएको हो या हैन, प्रष्ट पारेकी छिन् । टिकाले ले’खेकी छिन्, सबैमा नमस्कार।
नचाहँदा न’चाहँदै पनि केही कुरा लेख्नै पर्ने भयो। का’र्यक्रम इन्द्रेणीसँग प्राय व्यक्तिहरु परि’चित हुनुहुनु हुन्छ। यस कार्यक्रमको गरिमा, चर्चा, परिचर्चा, वि’श्वास र यस कार्यक्रमको अभिया’नका बारेमा जति प्रशंसा गरेपनि कम हुन्छ। म त्यहि का’मगर्छु भन्दा झन् गर्व लाग्छ। पछिल्लो समय सामाजिक स’ञ्जालमा एक भिडियोको अंश’लाई लिएर जुन चर्चा र मेरो आलो’चना भइरहेको छ। यसमा मेरो ध्या’नाकर्षण भएको छ।
उक्त भिडियोमा मैले बो’लेका केही राम्रा कुराहरु थिए। बि’डम्बना ति कुराहरु सबै आएको पाएको छैन। जुन कुरा भाइरल भएका छन्, ति कुराहरु प्र’चार गर्न लायक छैनन्। तर, त्यो भिडियोमा सोझो रुपमा कार्यक्रमका बारेमा परि’चित थिएन भन्दा घ’मण्ड कसरी हुन्छ ?
कुनै पनि संस्था र त्यसमाआ’वद्ध कर्मचारीहरु एकअर्कामा परि’पुरक हुन्छन भन्दा के बिराए ? मैले इन्द्रे’णीको कार्यक्रमका क्रममा शहरदेखि गाउँवस्तिका भिर’पाखा धाएकी छु। २०औं जोर जुत्ता चप्पल फ’टाएकी छु। केही पाएकी छु, केही गुमा’एकी छु। जुन प्रक्रिया चलि’रहने प्रक्रि’या पनि हो ।-इताजा खबरबाट
June 16, 2021 admin समाचार 5089
March 1, 2021 admin समाचार 6154
February 1, 2021 admin समाचार 7259